काठमाडौंमा दिउसै अ’न्धकार , के भयो यस्तो ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारकाठमाडौंमा दिउसै अ’न्धकार , के भयो यस्तो ?
काठमाडौंमा दिउसै अ’न्धकार , के भयो यस्तो ?
धुवाँ धुलोको कारण अहिले काठमाडौँ विश्वको सर्वाधिक प्र’दूषित सहर बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वा’युको गुणस्तर सू’चकाङ्क ए’क्यूआई ३०० भन्दा बढी हुनुलाई घा’तक मानिन्छ । तर उपत्यकाको वा’यु प्रदूषण ए’क्युआई ४७० रेकर्ड भएको छ ।
शुक्रवार मध्यान्हपछि उपत्यकाको वायुमण्डल एकाएक ध’मिलो हुन थालेको थियो । यो क्रम शनिवार पनि रो’किएको छैन । स्वास्थ्यकर्मी र सरकारले अहिले ना’गरिकहरूलाई बाहिर विना काम ननिस्कन आग्रह गरिरहेका छन् । उपत्यका अहिले अ’ध्यारो जस्तै छ ।
उनीहरूले अहिलेको प्रदूषणले स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न किसिमका स’मस्याहरू नि’म्त्याउने भन्दै चे’तावनी दिई रहेका छन् । काठमाडौँ वरिपरिका विभिन्न भागमा ड’ढेलो लागेको कारणले पनि उपत्यकामा प्र’दूषण बढेको अनुमान गरिएको छ । यो तु’वाँलो केही दिन अझै रहने मौसमविद्हरूले जनाएका छन् ।